100-400KVA Low Frequency UPS (3:3) - Prostar UPS|China UPS|Online UPS|UPS Manufacturers|UPS Suppliers|Inverter|Home Inverter|Solar Inverter|Solar Panel|Solar Module|Battery|UPS Battery
100-400KVA Low Frequency Ups (3: 3)
Uranus Series Low Frequency Online Ups ari nepepanhau mabikirwo, iyo pamwe chete munyika zvemberi DSP digitaalinen kudzora michina pari, uye IGBT yakakwirira Frequency Pulse Width Kusiyanisa unyanzvi (PWM) .Double-kutendeuka paIndaneti topology magadzirirwo inoita goho kakawanda kupota, izvo kushandiswa Tracking, danho-nokukiya, voltage regulator uye dzinobvisa panze ruzha, kupindira nesimba afoot nokufamba yakachena Sine Wave simba nemushonga, uye kuti nemateru zvikuru nzwisisika uye zvakakwana kudzivirira vanozvishandisa. Pashure Prostar R & D centre elaborative rakagadzirirwa anopfuura 10 yeas, Prostar akaita vakagadzirawo modular chimiro, ane kunopindirana oparesheni iri 5 nguva yakawanda hwakavimbika uye irambe kuita pane dzose Ups, MTBF riri pamusoro maawa 300,000.
Uranus Series Low Frequency Online Ups vakapakata mureza akavaka-goho voga transformers, kunofambira mberi yokunzvenga chinja uye Chinyorwa kuramba chinja, kuita nyaya Ups ane refu chaizvo vanokwanisa kuita pfupi-remudunhu. It raigona kushandiswa yakaipisisa zvakatipoteredza. Uyewo ane akakwana kudzivirira function.Moreover, rune AC chiyamuro, pamusoro-voltage, pasi-voltage, goho pamusoro-voltage, pfupi redunhu dziviriro, inverter, rectifier pamusoro-tembiricha kudzivirirwa, voltage pasi-voltage yambiro, bhatiri pamusoro ndinorova dziviriro uye nezvimwe kuchengetedzwa mune rimwe, nechokwadi maitiro nokushanda stably uye yakavimbika.
Uranus Series Low Frequency Online Ups kunosanganisira 3-danho dzi uye 3-danho outs kubva HT6K-HT400K, zvinogona kuva kufanana 8 zviyero Ups zvakananga yakafanira uye kutsanya. Usazviomesera neiyi Michina raigona kushandiswa siyana zvinorema uye systems.According zvinodiwa vatengi 'kunobvumirwa, zvinogona kuita N + 1 kana N + X kuvaka, asi maererano siyana zvinodiwa vatengi nedzimwe vachikwanisa, zvinogona kuva kuenderana ne chibhubhubhu 8 zviyero Ups, uye vose mutoro achapiwa akatakura vose 8 zviumbu Ups averagely pamusoro kufanana wandisa kupota hurongwa. Chero Ups of kufanana wandisa hurongwa akanga vakundikana, nemateru vachabatsirana mutoro wayo pakarepo, nechokwadi maitiro kumhanya zvakanaka. Munguva nedanho dzakafanana Ups, haina kuisa hondo uye mumwe standby, asi akasarudzwa makasitoma flexibly. Wokutanga akatendeuka musi Ups iri kwaita kuisa kuti hondo, kana hondo hurongwa akatadza, hondo chitupa pakarepo kune mumwe Ups, nokudaro kuona kuti Magetsi kuti vatengi panguva kushandisa muitiro, izvozvo kuitira kuva wechokwadi uninterruptible simba zvitengeswa.
1) DSP digitaalinen kudzora michina
Core hurongwa anoshandisa zvemberi-digitaalinen zvose DSP kudzora michina munyika, izvo zvinogona zvinobudirira pave nemateru 'makirisito hurongwa yakarurama, uye vakatsanya kumhanya.
2) Advanced IGBT inverter michina
Combined mukuru-rakavimbika uye yakakwirira-kunyatsoshanda IGBT inverter michina dzakakwirira-Frequency Pulse Width Kusiyanisa technology (PWM).
Zvinogona kuderedza ruzha uye simba kurasikirwa, nechokwadi vanokwanisa Takudzai nenzira dzakasiyana-siyana kushanda ezvinhu uye kuwana yepamusoro voltage goho uye kunonyanyisa mutengo-kushanda, asi kuti chiyamuro kunyatsoshanda zvinopfuura 95%.
3) Kwakachena-paIndaneti kaviri kutendeuka zvemichina
Hwakavimbika uye wakatsiga, pashure yakasvinwa nokudzorwa, kuti goho Sine Wave kubva wakachena-paIndaneti kaviri kutendeutsa michina, kwete chete ane mumhepo nenyonganyonga kudzvinyirira Sefa, asiwo mureza goho voga transformers, kunofambira mberi yokunzvenga, Nokuraramisa yokunzvenga, kuti chigadzirwa ichi pamwe yakakwirira kukwanisa kuita pfupi redunhu ano. Uye inogona kushandawo kune yakaipisisa nokushanda kwezvakatipoteredza.
4) dziviriro Perfect
Zvakakwana hurongwa kudzivirira Mabasa: Rine AC pamusoro-voltage, pasi-voltage, goho pamusoro-voltage, pasi-voltage, goho zadzisa, pfupi redunhu dziviriro, inverter, rectifier pamusoro-tembiricha kudzivirirwa, voltage pasi-voltage yambiro, bhatiri pamusoro ndinorova kudzivirirwa uye dzimwe kuchengetedzwa mune imwe inonzi hurongwa kuti ishande stably uye yakavimbika.
5) Simba wandisa Parallel Connection Rinoshanda
Kunogara uye yakavimbika magadzirirwe maindasitiri-mhando modular yakarongeka, pamwe zvizere digitaalinen DSP kudzora michina makirisito hurongwa, kuti chigadzirwa ichi kwete chete inogona kushandiswa N +1 / N + X redundancy uye mano Kurisa vachikwanisa, asi ndibvumirei simba yakasiyana uye yakasiyana nguva nemateru aigona kuva zvakafanana. It akaderedza zvikuru rokushandisa pre-uye post-rokutenga mari, uye ikawanda kukwanisa mari, asi akawedzera okumusoro dzezvimwe kuwedzera kugona.
6) Zvine Kukurukura hurongwa
The mureza vakapakata RS232 inowanikwa, itai kuonana relays, nechimbichimbi nokuchinja mudziyo EPO chiyamuro inowanikwa.
7) Low-simba bongozozo asi mukuru-kunyatsoshanda
Kuti vabudirire anopfuura 98% kubva Ultra-soro kunyatsoshanda pasi ECO upfumi womuenzaniso, izvo zvinogona zvinobudirira kuunza pasi uwandu magetsi, uye inobudirira maererano zvinodiwa simba-rinoponesa kunangwa nyika.
8) Kufembera yambiro hurongwa
LCD Panel otomatiki vasabatwa nerevane yambiro nenguva pachine, pamwe shangu nokuzvidzora kuongorora chirwere chaitika. Zvinogona ngozi panguva yakavanzwa nokuda Ups 'kukundikana, izvo zvakakonzera pangozi. Uyewo zvayaigona rwoga aramu nokuzvisarudzira kuti bhatiri buditsa kuti standby nguva ipfupi kuva wakatarwa.
9) Humanized Panel vanoratidza
Humanized emadziro Kurongwa, kuti vanokwanisa kuisa hurongwa parameters, zuva, goho voltage, bhatiri vanokwanisa, aramu basa, chiedza-mutoro shutdown, hurongwa vene nguva, Modem mezviruva, zvakadai mirairo, uyewo izvozvo zvinogona kusvika 120 zvemamiriro kukundikana mashoko vanoshandisa mubvunzo.
10) Super-simba ezvinhu anochinjika
chigadzirwa ichi ane kwezvakatipoteredza anochinjika mukuru, yakafara AC chiyamuro siyana, zvikuru akazoita kakawanda bhatiri kushandisa, uye zvinobudirira kunosvika bhatiri upenyu.
11) Zvine zadzisa Mano
Uchishandisa wakachena-paIndaneti kaviri kutendeutsa michina, pamwe goho voga transformers, kunofambira mberi yokunzvenga, uye kugadzira yokunzvenga.
Inverter zadzisa Mano yakasvika 110% / 125% / 150% overloading nguva anogona zvaiwanzoitika 300min / 10min / 1min.
Yokunzvenga zadzisa Mano yakasvika 150% / 170% / 250% overloading nguva anogona zvaiwanzoitika 60min / 10min / 1min.
HT100K-HT400K (vatatu-dzi uye Three outs)
100K / 80K
120K / 96K
160K / 128K
200K / 160K
400K / 320K
54 ~ 65dB (Distance 1M)
3 maitikiro 4 waya uye pasi, 380V ± 25%
3 maitikiro 4 waya, 380V ± 1%
50Hz / 60Hz ± 0,05% (By Battery)
Tsauranisa mutoro = 1%, kusaenzana mutoro = 3%
Danho shif angled
Tsauranisa mutoro = 1 °, kusaenzana mutoro = 2 °
Output pa 0 ~ 50% ~ 100% ≤5%, achipindura ≤ 10ms
bhatiri Max.charging iyezvino
Ndinorova nguva (Standard)
maitiro unodzivirira basa
Mazano pamusoro-voltage, pasi-voltage; goho zadzisa, shortcircuit; Inverter pamusoro-tembiricha; Battery pasi-voltage, pamusoro-voltage
Kumhanya tembiricha & Humidity
0 ℃ -40 ℃ dhigirii Celsius, asingasviki 95% (pasina condensing)
<1000m (pamwe nokuwedzera 100m, izvozvo kuchaderedza goho 1%) Max 4000m
Dry kuonana (bhatiri yakaderera, bhatiri zvaikosha, bapass / mhosva), EPO
EPO uye yokunzvenga
IP20 (pamusuo wakazaruka)
N + 1, N + X, unogona kuva kufanana differenct simba vanokwanisa
Munguva iyi pakati kukundikana
Dustproof & dampproof, nevamwe inverter transformer, mheni pakaitika Absorção de Água, kunofambira mberi haizoshandisi, Chinyorwa maintainence chinja
Financial And kuchengetedzeka
Industrial And Commercial mutero pezvaitika
Internet Large Computer Room
Previous: 8-100KVA Low Frequency Online Ups (3: 1) Next:6-80KVA Low Frequency Online Ups (3: 3)
6-80KVA Low Frequency Online Ups (3: 3)